नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ‘भण्डारा’ लगाउने – sunpani.com
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ‘भण्डारा’ लगाउने
सुनपानी । २९ चैत्र २०७६, शनिबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अति विपन्न वर्गलाई खाना खुवाउने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको आज बसेको आकस्मिक बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपालगञ्जमा रहेका अति विपन्न वर्गलाई लकडाउन अवधिभरी खाना खुवाउन पाँच ठाउँमा खाना खाने व्यवस्था मिलाउन थालेको नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालगञ्जका विपन्न (स्थायी बासिन्दा) लाई वडा कार्यालयहरुले राहत वितरण गरेपनि भाडामा बस्नेहरुले राहत पाउन सकेका थिएनन् । स्थायी बासिन्दामा राहत बाँड्दा पनि धेरै वडामा चरम विवाद देखिएको थियो । नगरमा भाडामा बस्ने मजदुर, विद्यार्थी अति नै समस्यामा परेको चर्को दबाब आएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खाना खुवाउने निर्णय गरेको हो ।
बागेश्वरी पार्क, हडियाबाबा, रामलिला मैदान, राँझाको आदर्श स्कूल र कोरियनपुरको बगियामा भण्डारा लगाइने छ । यी ठाउँमा जो पनि आएर खाना खान सक्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले बताउनुभयो । ‘नेपालगञ्जका स्थायी वा अस्थायी जो सुकै हुन् । घरमा चुल्हो बाल्न असमर्थ भएकाहरुले यी ठाउँमा आएर खाना खान सक्छन्, प्रवक्ता रिजालले भन्नुभयो, खाना खाने क्रममा सामाजिक दुरी कायम गरिनेछ ।’
नेपालगञ्जका मेयर डा. राणा, उपमेयर उमा थापामगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्का, एसपी वीरबहादुर ओलीसँग सुरक्षा र सामाजिक दुरीका विषयमा टुंगो लगाउने बित्तिकै खाना खुवाउन शुरु हुने बताइएको छ । ‘सम्भवतः भोली साँझदेखि नै खाना लाग्छ, प्रवक्ता रिजालले भन्नुभयो ।